Liyakhula ibhizinisi lomculo weGqom | isiZulu
Liyakhula ibhizinisi lomculo weGqom
Usezonandisa kwi-Gqom in Concert uBabes wodumo
Angidinganga isiNgisi ukuqokwa kuma-BET - Babes Wodumo
IGqom Queen ebhizinisini lezinwele zokufakelwa
Zowakha Mbatha, ILANGA LangeSonto
Durban - Basazophela ukudliwa abakhiqizi nabadidiyeli bomculo oshisa izikhotha kulezi zinsuku igqom uma bengafuni ukuvula amehlo nezindlebe njengoba lo mculo usuphenduke intandokazi nakwamanye amazwe omhlaba.
Ugeqe amagula uZakhele Madida, odume ngelikaZakes Bantwini, exwayisa futhi ethiphisa abakhiqizi balo mculo, abebebuthene eMoses Mabhida Stadium ngoLwesine emini engqungqutheleni ethathe izinsuku ezimbili njengoba iqale ngoLwesithathu.
Utshele izethameli emehlweni ukuthi njengoba bona bengosomabhizinisi abangakwazi ukucula noma ukukhiqiza lo mculo ngeke bayeke ukubasebenzisa laba uma beza kubona ngoba lo mculo usuyibhizinisi elikhulu.
UZakes ubayale ngezinto eziningi ezithinta izinkontileka ngokwehlukana kwazo, umsebenzi jikelele kule mboni kusukela ekubhaleni, ekukhiqizeni, ekuphathweni kwabaculi nokunye okuningi.
OLUNYE UDABA:UBabes Wodumo 'webe' umcimbi
UZakes uke waba yisikhulu esihlonishwayo kwaSony Music futhi unenkampani yakhe, iMayonie Produxctions egqame kakhulu isengamele umsebenzi kaLvovo Derrango. Akazange ahlonize ukuthi iqgomu liya phambili. Kuvele kuyo futhi le ngqungquthela ukuthi isungulwe nguye uZakes, nguDJ Sox noDJ Tira.
Lokhu kuvezwe nguSox othe bobathathu bavumelana ngokuba basungule lesi sigcawu ukuze balekelele le genge efikayo njengoba kuyinto eyaziwayo ukuthi iningi lasebegqamile kulo mculo liwenzela emakamelweni nje.
"Igqom lizalwa eThekwini, eNingizimu Afrika ngakho-ke nabantu baphesheya kumele bazi ukuthi kumele kuqalwe la uma kuqashwa abantu. Lesi sigcawu sisisungulele ukuba nina enisilandelayo ningangeni ezikhinsini esingene kuzo thina phambilini," kusho uDJ Sox ngaphambi kokudedela uZakes okuthe zisuka nje wacacisa ukuthi kuziwe ngemali laphayana, yibhizinisi leli.
"Ngingene kule nto ngoba ngiyabona isiyayenza imali, ngizonisayina futhi nginimeneje, kangidlali ngalokho. Ngizochaza kafushane ngokuhlukahlukana kwezinhlobo zama-deal asayinwayo kule mboni kodwa ngizoba mfishane ukuze ningadideki, okunye nizothola ithuba lokukwazi uma sekuyisikhathi semibuzo.
"Okumele nikwazi wukuthi njengoba sonke sila yingoba kasiqashiwe, le mboni inayo imali kodwa inzima. Kumele niyihlakaniphele iimali ngoba uma ungumculi namuhla uyabanda, kusasa uyashisa. Niyitshale imali futhi niyitshale ezindaweni ezizonizuzisa," usho kanje kwaqhuma ihlombe.
Akagcinanga lapho njengoba ehlaziye okuningi okwenzeka kusukela phansi kumculi engakaqophi kuze kube sekugcineeni sekuvunwa izithelo, sekwabelwana ngenzuzo.
Yinqwaba yezikhulumi nezikhungo ezisebenza nezifundisa umculo ezibe yingxenye yale ngqungquthela. NgoMgqibelo bekunekhonsathi lokuqala lalo mculo ePavillion Shopping Centre elibizwa ngeGqom In Concert nebelobophele inqwaba yabaculi.
UBabes Wodumo 'webe' umcimbi
Iphenduke inkundla kaBabes Wodumo iGqom in Concert, ebise nxanxatheleni yezitolo iPavallion Mall, eWestvile ngaphandle kancane kwedolobha iTheku.
Uthuse abalandeli bakhe uBabes wodumo, ngemuva kokuba efake i-poster yomcimbi iGqom in Concert, lokhu kwenzeka nje le ntokazi yabiza itshe lemali ngesikhathi iqashwa ukuthi izonandisa kulo mcimbi.